သံမဏိကေဘယ်ကြိုး / ရထားလမ်းရထားစီးရီး
Metal CDEnation URTSATS ကိုစီးရီးတွင်ချိတ်ဆက်ထားသောသတ္တုကွင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးလူများအားအလွန်ကောင်းမွန်သောဆွဲဆောင်မှုရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သတ္တုစပ်ကုလားကာများသည်နေအိမ်များ, ဈေးဝယ်စင်တာများ, လေဆိပ်, တိုက်ခန်းများနှင့်အခြားနေရာများတွင်အလှဆင်ခြင်းအတွက်သင့်တော်သည်။
ထုတ်ကုန်သည်ထစ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အလွန်ခိုင်မြဲသောမာကျောမှုကိုပါ0င်သည်။ (ထစ်မာနစ်မာနစ်သည်ပစ္စည်းများကိုထစ်ဖြင့်ခုခံခြင်းဖြစ်သည်။ ) မြင့်မားသောဖိအားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သယံဇာတကိုတွန်းလှန်နိုင်တယ်။
လေဆိပ်, စူပါမားကတ်, တိုက်ခန်းအဆောက်အအုံ, မြေအောက်ရထားဘူတာ,
1. Our ကုမ္ပဏီတွင်အဆောက်အအုံထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ရှိသည်။
2. Our ကုမ္ပဏီသည်အကြီးစားစီမံကိန်းထုတ်လုပ်မှုတွင်အတွေ့အကြုံရှိသည်။
4. အဟေ့ကုမ္မဏီသည်အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်သောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူအခွင့်အလမ်း, ကြိတ်ခွဲစက်များ,